Paika 5S japoney: nahomby ny fampiharana teny anivon’ny CSB valo eto Mahajanga | Région Boeny
Miteraka vokatra tsara sy toe-tsaina vaovao nefa tsy mitaky volabe ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny asa amin’ny alàlan’ny 5S hoy ny Fiaraha-miasa iraisam-pirenena japoney na JICA (Japan International Cooperation Agency).
Ny Alarobia 17 jiona 2015 dia nanao jeri-todika sy tatitry ny asa notanterahiny nandritra ny telo volana lasa ny JICA nifototra amin’ny fampiharana ny paika 5S niaraka tamin’ireo mpiasan’ny fahasalamana sy mpitsabo teny anivon’ny Tobi-pahasalamana fototra na CSB (centre de santé de base) miisa valo eto Mahajanga.
Rtoa Yasuda Mayo, izay mpilatsaka an-tsitrapo japoney no mpandrindra ny JICA eto Mahajanga eo anivon’ny Sampandraharaham-paritry ny fahasalamam-baohoaka eto Boeny. Nanatrika ny fotoana tamin’izany ny solontenan’ny ministera mpiahy, Atoa Andriamanjato Hery sy ny lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny Atoa Hemedy, ary ny talem-paritry ny sampandraharahan’ny fahasalamam-bahoaka.
Ny paika 5S dia fomba fisainana sy fandrindran’asa japoney izay nahitan’izy ireo fahombizana hatrizay ka ezahiny zaraina hanatsarana ny fomba fiasa malagasy, amin’ny alàlan’ny fanamaivanana sy fanavaozana ny tontolon’ny toeram-piasana toy izao S1: Sivanina, S2: Sokajiana, S3: Sasana, S4: Soratana, S5: Saintsainina. Ny tanjona lehibe kendrena amin’izany hoy Rtoa Yasuda Mayo dia ny mba hiantefan’ny vokany mivantana amin’ny fahasalamam-bahoaka.
Tsy tokony hadinoina hoy izy fa azo atao tsara ny manitatra ny paika 5S amin’ny toerana rehetra haleha sy hiasana ary isa-tokatranon’ny vahoaka Malagasy.
Marihina fa efa ela no niasan’ny JICA mikasika ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny asa fa nohon’ny toe-draharaha politika teto Madagasikara dia nisy fotoana niato ity tetik’asa ity ka izao indray vao niverina ny fiaraha-miasa.